PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-27 - U-eymael ukhokhe inhlawulo ukuphunyuka kunoxhaka
U-eymael ukhokhe inhlawulo ukuphunyuka kunoxhaka
KUPUTSHUKA ukuthi uzehlisile wavuma ukukhokha inhlawulo efunwa yipolokwane City ebingabaqashi bakhe bakudala uluc Eymael ongumqeqeshi omusha wefree State Stars.
Leli phephandaba lithole ukuthi ipolokwane inele yezwa nje ukuthi u-eymael useqashwe yifree State Stars yavusa umgoqo ebimbekele wona ukungawuthathi umsebenzi kwipremier Soccer League (PSL). Ikhumbuze lo mqeqeshi ukuthi kunemali ayikweleta le kilabhu enombandela othinta inkontileka yakhe nayo.
Umthombo wethu oncikene kakhulu nalo mqeqeshi, uthi ngesikhathi u-eymael ebona ukuthi uzophindeka esenzeke ngesizini edlule lapho ipolokwane imkhiphe esesebenza kwibloemfontein Celtic, unqume ukuvuma ukukhokha.
Ethintwa ngalolu daba u-eymael uthe: “Nginesivumelwano enginaso nabammeli bepolokwane. Lesi sivumelwano kasiyithinti nakancane ifree State Stars. Ngicela ukuthi lokho kuhlonishwe.”
Ifree State Stars ibe yikilabhu yokuqala kule sizini ukuxosha umqeqeshi njengoba u-eymael ethathe indawo kasammy Troughton ohole le kilabhu yakwaMokoena emidlalweni emibili nje kuphela idliwa ngamazulu FC ngo1-0 emlazi nangesikhathi ibambana nebidvest Wits ngo-2-2 ngolwesithathu ebusuku efree State.
U-eymael ulifanise nesikhulu isibusiso ikhefu lefederation of International Football Association (Fifa) athe lizomsiza kakhulu ukwazana kahle nabadlali bale kilabhu.
“Isikhathi esiningi ngizosichitha nabadlali ukubaqonda kahle.
Iningizimu Afrika isifana nekhaya lesibili kimina njengoba ngiyifanisa nesudan okungelinye lamazwe engizifelayo ngawo,” kusho lo mqeqeshi odabuka ebelgium.
UMQEQESHI omusha wefree State Stars uluc Eymael ozehlisile wakhokha inhlawulo ebifunwa yikilabhu yakhe endala ipolokwane City.